Graton मा सूर्य मा रमाईलो! - Graton
नमस्ते साथीहरु! हामी आशा गर्दछौं कि तपाई उत्साहित हुनुहुन्छ कि न्यानो मौसम अन्ततः यहाँ छ! हामी जान्दछौं कि हामी हौं, र त्यसैले हामी केहि सम्पत्ति अपडेटहरू प्रदान गर्न समय निकाल्न चाहन्छौं जुन तपाईंलाई सबै गर्मी भाइबहरू प्रदान गर्न निश्चित छन्।
तपाईं कसै-कसैले यो खबर सुन्नुभएको हुन सक्छ ... हाम्रो पोखरी अब खुला छ! हामी धेरै लामो ब्रेक पछि तपाईंलाई सबै स्वागत गर्न मा धेरै खुसी छौं। होटल र स्पा पाहुनाहरूको लागि पोखरी पहुँच हप्ताको days दिन गर्मीका घण्टाको साथ am बिहान 8 देखि साँझ 8 सम्म उपलब्ध हुन्छ। पहुँच ती पाहुनाहरूको लागि पनि उपलब्ध छ जुन हाम्रो डेबेड वा केबाना भाँडामा लिन्छ। क्याबाना र डेबेड भाँडा प्रत्येक दिन उपलब्ध हुन्छ र guests पाहुनाहरूको अधिकतम ओप्यान्सी हुन्छ। आगन्तुकहरूले सोनोमा काउन्टीको सब भन्दा सुन्दर सेटिंग्समा फर्केर आउन सक्छन्। हाम्रो प्रशंसक लाउन्ज बेडमा राख्नुहोस् वा मिड-डे खाजा वा खाजा खाँदा तपाइँको मनपर्दो केही शोहरूमा खिच्नुहोस्।
तातो मा शान्त रहनका लागि उत्तम ठाउँ। आगन्तुकहरूले हाम्रो सुन्दर, क्रिस्टल निलो पोखरीमा रमणीय पाम रूखहरूले घेरिएको पौंडी लिन सक्छन्।
हाम्रो क्याबाना पूर्ण रूपमा संलग्न छ र एक फ्ल्याट स्क्रिन टेलिभिजन सुविधा, एक मिनी फ्रिज बरफ चिसो संग पूरक, पूरक जलपान, नुहाउने तौंली, र आराम गर्नु छ भने द्रुत बिरालो झोला लिन प्लस लाउन्ज फर्नीचर। डेबेड भाडाहरू आंशिक रूपमा रेशम पर्दा र तपाईंको खुला ट्यान प्राप्त गर्नका लागि खुला शीर्षको साथ बन्द छ।
क्याबाना र डेबेड भाडाहरू हप्ताको सात दिनहरू उपलब्ध छन् र (7०7) .88885.7100०० लाई कल गरेर आरक्षित गर्न सकिन्छ। रिजर्भेसनमा people जना सम्म समावेश हुन सक्छ त्यसैले तपाइँका साथीहरूलाई एकसाथ मिलाउनुहोस् र रोकिनुहोस्!
हामीसँग छनौट गर्नको लागि खाद्य पेयहरूको विस्तृत चयन छ। प्रस्तावमा साना प्लेटहरू, सेयर प्लेटहरू, एन्ट्रीहरू, र विशेषता ककटेल हुन्छन्।
हाम्रो टोलीका केहि सदस्यहरू उनीहरूको शीर्ष पूलसाइड, खाना र पेय पिक्सहरू केहि सेयर गर्न चाहन्थे। रोजाईले निम्न समावेश गर्दछ:
मोजारेल्ला, गोर्गोनजोला, प्रोसिउटो डि पर्मा, र बाल्सामिक कटौतीको साथ तयार छ।
जैतुन टेपेनाडे, पेस्टो बाख्रा चीज, र काठ ओभन भुटेको पेपरोनाटाको चयन।
स्ट्रबेरी Spiked लेमोनेड
ताजा, गडबडी स्ट्रबेरी, अगावे, भोदका, र कागती जुसको साथ बनेको।
ब्लूबेरी Spiked लेमोनेड
ताजा ब्लुबेरीहरू, निलो कुराकाओ, अगावे, भोदका, र निम्बूको रसको साथ बनेको।
जबकि हामीले हाम्रो खानाको सबै ध्यान पाए, हामी पनि एक नयाँ मार्केटप्लेस सुविधा खोल्ने घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छौं: ला टेक्निटा!
प्रामाणिक, मेक्सिकन भोजन प्रस्तावहरूको ट्याकोस, बुरिटोस, पोजोल, तोस्ताडास, र अधिक सहितको स्वादिष्ट चयनमा भोज। अद्यावधिक घण्टाको लागि क्लिक गर्नुहोस् यहाँ हाम्रो बजार पृष्ठ भ्रमण गर्न। हामीसँग केहि सुझावहरू छन्, यसले तपाईंलाई सुरू गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ:
Taco Pescado एक सानो पिको र तपाईंको स्वाद कोपिलिका लागि लाइमको साथ।
गीला बुरिटो कार्निटास र ग्वाकोमोलको छेउले भरिएको छ जुन कुशलताले शिल्प गरिएको छ र यसलाई भस्म पारिन्छ।
एउटा अन्तिम आइटम हामीले तपाईलाई सुझाव दिन्छौं कि तपाईको गर्मीमा फाइदा लिनुहोस् हाम्रो स्पा र सैलुनमा आराम गर्ने दिन हो। हामी साझेदारी गर्न पाउँदा खुसी छौं कि हाम्रो स्पाले मसाज र अनुहारको उपचार पुनः सुरु गर्यो। मलाई तपाईको बारेमा थाहा छैन, तर यो मेरो अन्तिम उपचार देखि वर्षौं जस्तो लाग्छ, त्यसैले प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। तपाईंको अर्को अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस् र हामीलाई त्यहाँबाट लिनुहोस्।
60० मिनेट स्पा सेवामा आफैलाई उपचार गर्नुहोस् र तपाईंको दुखाइ र पीडा गुमाउनुहोस्।
हाम्रो स्पा र सैलुन टीम स्पामा तपाईंको दिन पूर्ण बनाउनको लागि उनीहरूको मनपर्दो उपचारको एक जोडी सिफारिस गर्न चाहन्छ। यसमा समावेश छन्:
दुबै नयाँ आगन्तुकहरू र फर्कने साथीहरू दुबैको लागि भद्र मालिश। एक उपचार जसले उपचारात्मक बोटानिकलहरू र स्टीम्ड टावलको पूर्ण एरे प्रयोग गर्दछ हाम्रो स्पा सेवाहरूको लागि पूर्ण परिचय हो।
ठ्याक्कैै यो जस्तो देखिन्छ, हट रक्सले तातो बेसाल्ट स्टोनको प्रयोग समावेश गर्दछ जुन शरीरभरि मांसपेशिको तनाव कम गर्नका लागि राखिन्छ र राखिन्छ। यो एक शान्त, चिसो ढु stone्गाको अनुहारको मसाजको पछि हो जुन तपाईंलाई शुद्ध आनंदको स्थितिमा राख्दछ।
चाहे तपाइँ पूलबाट लाउन्ज गर्न चाहानुहुन्छ, स्पामा एक दिन खर्च गर्नुहोस्, वा केही स्वादिलो खाना र पेय पदार्थहरूको नमूना पाउनुहोस्, त्यहाँ सँधै केही छ ग्र्याटनमा। सबै सम्पत्ती अद्यावधिकहरूको सम्बन्धमा भर्खरको जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा नजर राख्नुहोस्। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईहरु सबैको रमाइलो गर्मी छ, र हामी तपाईलाई घाममा केहि चाँडै भेट्ने आशा गर्दछौं।